I-Nandi Villa - I-Airbnb
Indawo yonke ibungazwe ngu-Srinivasa
U-Srinivasa Ungumbungazi ovelele
I-Nandi Villa iyindawo enhle enefenisha ephelele yokuhlala engu-1BHK phakathi nobuhle bezintaba ezinombono omuhle wamagquma, indawo ethandwayo yase-Bangalore ngaso sonke isikhathi. I-villa inikeza indawo yokuhlala enhle kakhulu ku-1BHK enethoyilethi elinamathiselwe, ikamelo elingu-1living elinethoyilethi, ikhishi elingaphakathi endlini, kanye nendawo yokuhlala ngaphandle kotshani oluhlaza okwesibhakabhaka nomgodi womlilo futhi inazo zonke izinto zokwenza indawo yokuphumula ejabulisayo nomndeni wakho. Balekela impilo yedolobha bese uya e-Nandi Villa - ikhaya elikude nasekhaya. -
I-villa evulekile enekamelo lokulala eliyi-1 elinomshini ophephetha umoya oshisayo ongu-1, umatilasi omkhulu ongu-1 kanye nendlwana eyodwa engu-2, ikamelo lokuphumula elivulekile, ikhishi elinendawo yokudlela edingekayo, isitofu esishisayo kanye nefriji, izindlu zokugezela ezingu-2 ezinamathiselwe, negumbi lokugezela elingu-1 lihlanganisa ubhavu wamanzi ashisayo. Amanzi ashisayo e-solar ayatholakala imini nobusuku ngokuhlinzekwa kwehitha ngezikhathi ezithile uma kudingeka.
1 umbhede omkhulu, Umbhede omkhulu ongu-1, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-2, 1 usofa
I-Nandi Villa itholakala e-Muddenahalli okuyindawo engamakhilomitha angu-7 ukusuka e-Chikballapur Esifundeni sase-Karnataka State. Ukufinyelela kalula ethempelini le-Yoga Nandeeshwara (Inkosi Shiva) okuwukudideka kwamathempeli amabili nomunye wemibukiso emihle kakhulu yesakhiwo sethempeli le-Dravidian. Indawo elandelayo ethokozisayo ongavakashelwa nakanjani ngamagquma – i-Skandagiri, i-Chennagiri, i-Nandi Hills – Amagquma aluhlaza okotshani ayinto ephawulekayo ngempela.
Ungangithinta ocingweni noma nini phakathi nokuhlala
USrinivasa Ungumbungazi ovelele